Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Knowledge for Facebook.
လုပ်ရာမှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ... ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်
ဒီနည်းလေးကို သုံးနိုင်ပါတယ် ...
အဲဒီလို လုပ်တာမှ Error Message တက်နေတုန်းပဲ ဆိုရင်တော့ အားလုံးကို ပိတ်ပြီး နာရီဝက်လောက်စောင့်ပြီးမှ အစကနေပြန်ဝင်လုပ်ပါ ...
အဲဒါဆိုရင်တော့ အဲဒီ Giving meacall ကို အမှတ်လေးတပ်ပေးပြီး ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ခဏလောက်အကြာမှာ ဖုန်းဝင်လာပါလိမ့်မယ် ...
တစ်ခုကြိုပြောချင်တာက စိတ်ရှည်ဖို့ ပါပဲ ...
Credit to >> သဇင်ကိုကို
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Photo Shop ဆိုင်ရာ
ကဲသူငယ်ချင်းတို့ရေ ..... အလုပ်တွေလည်းမအား .... ခရီးတွေလည်းထွက်နေရတော့ ...... ပို့လေးတွေလည်းမတင်ဖြစ်တာကြားသွားပြီ .... ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ..... ပုံလှလှ လေးတွေပြင်လို့ရအောင် .... background လှလှလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ .....
background အခု 60 ပါတယ်နော် .....
အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် ...... ကျွန်တော်ပြောနေရင်ကြပါတယ်ဗျာ...... အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေဒေါင်းလိုက်တော့နော် ......
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Knowledge For Blogger
ယခု တစ်လော မ်ိတ်ဆွေ တစ်ဦး၏ ဘလော့ Reported Attack Site အဖြစ်သတ်မှတ် ခံလိုက်ရခြင်းကို လိုက်ကူညီရင်း အခြား ဘလော့များကိုလဲ လိုက်လံ ရှင်းလင်းပေးရင်း တွေ့လာတာကတော့ မြန်မာ ဘလော့ဂ်များ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ချိတ်ဆက် ထားကြသဖြင့် ဘလော့ဂ် အားလုံး လိုလိုနီးပါးဟာ Malware Identified ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်..
ဒါဆိုရင် မကြာမှီ အချိန်အတွင်းမှာ Google က အဲဒီဆိုဒ်တွေကို အနှေးနဲ့ အမြန် Reported Attack Site များ အဖြစ် သတ်မှတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
Google က ဘာလို့ အဲဒီလို လုပ်ပါသလဲ??? ကျွန်တော်တို့ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ဂူဂယ်က စောင့်ကြည့်ပြီး ဝဘ်ဆိုဒ် အဆင့်အတန်းတွေ ခွဲပေးပါတယ် အဲဒါကို Pagerank လို့ ခေါ်ပါတယ် ၁၀ မှတ် ဆိုရင် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ၀ ကတော့ အနည်းဆုံးပါ ပါချီပါချက် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ့ဗျာ ...
အဲဒီလို ဖြစ်တော့ ဥာဏ်ကြီးရှင်များက ဒါကို ဘယ်လို Hack ရမလဲ ဆိုပြီး တီထွင်ကြတာမှာ လင့်တွေ ချိတ်တဲ့ နည်းနဲ့ အသုံးပြုပါတယ် ဒီတော့ ဘလော့တစ်ခုဟာ ဘယ်ကိုသွားသွား သူ့လင့်တွေ က နေရာတကာမှာ ဆက်သွယ် ထားတယ် ဆိုတော့ PageRank တွေ တက်လာပါတယ်..
အဲဒါကို ဂူဂယ်က သိလို့ အခု ဆိုရင် PageRank တွေကို Update မလုပ်ပေးတာ အတော်ကြာခဲ့ပါတယ် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကိုးလ တစ်ခါ အကြီးစား Update လုပ်ပေးပါတယ် မနှစ်က သူတို့ လုပ်ပေးခဲ့တာ ဧပြီလတုန်းကပါ ထားပါတော့ ဒါက ပြဿနာရဲ့ အခြေခံ ဇစ်မြစ်ကို သိအောင် ပြောပြတာပါ..
ဒီတော့ ဂူဂယ်က ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကို စစ်ပါတယ် အဲဒီ အခါမှာ လင့်သေနေတာတွေကို ချိတ်ထားတာတွေကို သူတို့ တွေ့ပါတယ် အဲဒီလို လင့်သေနေတာတွေ ချိတ်ထားခြင်း အားဖြင့် သင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ဖတ်နေသူ တစ်ယောက်ဟာ စာတွေ အကုန်ပေါ်လာပြီး မြင်နေရပေမယ့် ဘရောက်ဇာက ဖတ်တာ မပြီးပဲ လင့်သေ နေတာတွေကို သူက ဆက်ရှာနေပါတယ် အဲလို အများကြီး သင့်မှာ ရှိနေပြီ ဆိုရင် သူတို့က ၉ ပါတ်ခန့်အကြာမှာ Reported Attack Site စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ် ဒါဆို လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို စာတန်း အနီရောင်ကြီးနဲ့ ကြိုဆိုတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ကျန်တဲ့ အသေးစိတ် ကုသနည်း ကတော့ တစ်နေ့က တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ Reported Attack Page အဖြစ် မိမိဆိုဒ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရလျှင် ဖြေရှင်းနည်းမှာ ဖတ်ကြည့်ပြီး လုပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ.။
အခုဒီပိုစ့်မှာ ပြောချင်တာက နောက်ထပ် တွေ့လာတာလေး တွေကို သတိပေးချင်လို့ပါ..
အခု ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေမှာ ဘလော့ဂါ ပလိပ်ရောဂါ ကူးစက်နေပါပြီ တစ်ကယ့်ကို ပလိပ်ရောဂါ နဲ့ တူပါတယ်..
သူ့ရဲ့ ကူးစက်နည်းလေး ပြောပြပါမယ် ဘလော့ တစ်ခုဟာ သူက လင့် အသေတွေ ချိတ်ထားပါတယ် အဲဒီတော့ အဲဒီဘလော့မှာ Malware ရှိနေပြီ တစ်နည်း တင်စားရင် ပလိပ်ရောဂါ ရှိနေပြီပေါ့ဗျာ (ဒီကစလို့ ဒီပြဿနာကို ပလိပ်ရောဂါလို့ပဲ တင်စားသုံးသွားပါမယ် ပိုရှင်းအောင်ပါ)သူက တစ်ခြား ဘလော့တစ်ခုကို သွားလည်ပါတယ် ကွန်မန့်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒါဆို အဲဒီ ကွန်မန့် အပေးခံရတဲ့ ဘလော့ဟာ ကျွန်တော့် ဘလော့ ဆိုကြပါစို့ရဲ့ အဲဒီအခါ ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ အဲဒီ ကွန်မန့်ပေးလိုက်သူ နဲ့ ချိတ်ဆက်သွားခြင်းဖြင့် အဲဒိ ကွန်မန့် ပေးခံရတဲ့ ပိုစ့်ဟာ Malware ရှိတယ် ပလိပ်ရောဂါ ရှိနေတယ် လို့ ဆက်ပြီး သတ်မှတ်ခံရပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကျွန်တော် ကွန်မန့်ပေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို အဲလိုတွေ သွားပြီး ပြတော့တာပဲ ကူးစက်တော့ တာပါပဲ အဲဒီကနေ တစ်ဆင့် အဲဒီဘလော့ တွေကို ချိတ်ထားတဲ့ တစ်ခြား ဘလော့တွေကိုလဲ အဲဒီလို ဆက်ပြီး ကူးစက်တာပါ....
ဒီတော့ ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆွေများ ရောဂါ ပြန့်ပွားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုဒ်ဘားမှာ ရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်လင့်တွေကို ဖြုတ်ထားပါ Blog List တွေ Link List တွေ follower widget တွေကို ဖြုတ်ထားပေးပါ ပြီးရင် တတ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ပိုစ့်တွေ ကို ကွန်မန့်ပေးတာဖြုတ်ထားပါ ကိုယ်လဲ သူများကို ကွန်မန့် မပေးပါနဲ့ ပေးချင်ခဲ့ရင် လဲ Blogger Profile ရှိတဲ့ ဂျီမေးလ်တွေနဲ့ Signin လုပ်ပြီး မပေးပါနဲ့OpenID နဲ့ နာမည် ရေးပြီး ကွန်မန့်ပေးကြပါ လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အကုန်လုံး ကိုယ့်ဆိုဒ်တွေကို ရှင်းလင်းရေး လုပ်ပြီးချိန်အထိ ရောဂါပိုး ကူးစက်တာ ငြိမ်သွားတဲ့ အထိပေါ့လေ ...
ဘယ်လို ရှင်းလင်းရေး လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ http://sitecheck.sucuri.net/scanner/ ကိုသွားလိုက်ပါ ကိုယ့်ဘလော့ လိပ်စာ ထည့်ပြီး Scan ဖတ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် ဆိုဒ်ဘားတွေ ဖြုတ်ထားပြီးပြီ ဆိုရင် သူက ဘယ်ပိုစ့်တွေဟာ Malware တွေ ရှိနေတယ် အဲဒီပိုစ့်ကို ကွန်မန့် ပေးထားတဲ့ ဘယ်လင့်တွေ ဘယ် Profile တွေဟာ ကူးစက်ရောဂါ ရှိနေတယ် ဆိုပြီး ပြပါလိမ့်မယ် အဲဒီ ကွန်မန့်တွေကို Dashboard >>Comments ထဲကနေ Spam ထဲ ခဏ ထည့်ထားပေးပါ ပြီးရင် တစ်ခါ ထပ်စစ်ကြည့်ပါ Status:Site verified to be secure and free of makware လို့ ဖြစ်တဲ့ အထိ စစ်လိုက် လင့်တွေ ဖြုတ် ကွန်မန့်တွေ ဖြုတ် လုပ်ပေးပါ ဒါဆို အဆင်ပြေပါပြီ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ လင့်တွေ ဖြုတ်ထားတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ အသိပေးချင်ပါတယ်..။
အခု ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်တာကတော့ ပြဿနာ တက်နေကြတဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေ ညီကို မောင်နှမ များက သူတို့ လင့်တွေ ကွန်မန့်တွေထဲက လူတွေကို တစ်ယောက်ချင်း လိုက်ပြီး မရှင်းပြတတ် မရှင်းပြနိုင် ဖြစ်နေလို့ သိထားရအောင် သတိထားရအောင် ရှင်းလင်းရေးတွေ လုပ်ရအောင် ပိုစ့်လေး တစ်ခု နဲ့ ရှင်းပြပြီး သတိပေးပေးပါ လို့ တောင်းဆိုကြတဲ့ အတွက် ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖြစ်တာပါ..အကူအညီ လိုခဲ့သည် ရှိသော် ကျွန်တော်ရဲ့ ဆိုဒ်ဘားမှာ ရှိတဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာ အတိုင်း ဆက်သွယ် နိုင်ပါတ်..။
Credit : http://www.linhtet.net
ကဲ ဖြစ်လာခဲ့ရင် လတ်တလော ဖြစ်နေခဲ့ရင် အောက်က အဆင့်လေးများ အတိုင်း လိုက်လုပ်လိုက်ပါ..။
Samsungဖုန်းတစ်ချို့ အင်တာနက်မသုံးဘဲ ပိုက်ဆံတွေအလိုလိုကုန်ရတဲ့ပြဿနာ
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ဖုန်းနည်းပညာ
Posted by Southeast Asiaking |
Posted by Southeast Asiaking
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: browser for pc